Google ga-ewepụta mmelite mmezi kwa ọnwa atọ | Akụkọ akụrụngwa
A ga-ewepụta gam akporo Nougat 7.1, 7.1.1 na 7.1.2 kwa nkeji ọ bụla dịka mmelite mmezi
Ọ bụrụ na ndị nrụpụta ahụlarị ha ka ha nwee ike bipụta mmelite nke ekwentị ha ka ndị ọrụ nwee ụdị nke gam akporo kachasị ọhụrụ, na nke a 7.0, na ọhụrụ nhazi oge na Google ga-amalite n'ime afọ niile, anyị nwere ike ịsị na ọ ga-enweta obere abụba.
Ma ọ bụ na @evleaks (Evan Blass) ebipụtala na akaụntụ Twitter ya na Google ga-etinye mmelite mmezi ọnwa atọ ọ bụla nke a ga-akpọ dị ka gam akporo 7.1, 7.1.1 na 7.1.2. Mmelite ndị a ga-eweta atụmatụ ọhụrụ na mmezi ahụhụ na ndozi na arụmọrụ sistemụ.
Mbido mmezi mbụ na-aga n'ihu ma Google ekwuola na a ga-etinye ya na ọdịda a dị ka a Mmepụta preview. Nhapụ a na-atụ anya na ọ ga-eweta Nexus Launcher, Google Assistant, na bọtịnụ gam akporo emegharịrị.
Nke atọ na-esote kwa afọ mmezi releases nke gam akporo Nougat ga-gam akporo 7.1 / 7.1.1 / 7.1.2
Ọzọkwa ga-enye anyị a mma echiche site na mgbe Google ga-ewepụta nsụgharị kachasị ọhụrụ nke gam akporo Nougat, yabụ anyị ga-ekwu maka ụdị a na afọ niile ruo mgbe anyị malitere ịma banyere mmelite kachasị esote.
Mgbanwe dị ukwuu nke a ga-eburu n'uche, ebe ọ bụ na ewepụtara nsụgharị ndị ahụ kwa ọnwa atọ, nke ahụ ga-ahapụ anyị ka ọ bụrụ na Google I / O 2017 na-esote, nke a ga-eme na Mee, anyị ga-ekwupụta nke ọhụrụ Major version, otú Mmepụta preview anọ maka ugbu a version. Obere ọgba aghara, belụsọ Google ebipụta ọhụụ ọhụrụ na February maka ndị mmepe nke ụdị na-esote.
N'ịlaghachi na mbido, anyị ga-ahụ ndị nrụpụta na-ebipụta mmelite ndị ahụ emebere na mbụ maka ngwaọrụ Nexus mana na, n'ikpeazụ, bụ ụdị ọhụrụ nke gam akporo. Na Nbudata nke gam akporo ọ ga-agbago na mmelite mmezi ọhụrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » A ga-ewepụta gam akporo Nougat 7.1, 7.1.1 na 7.1.2 kwa nkeji ọ bụla dịka mmelite mmezi
Samsung Galaxy A3, A5 na A7 nke 2017 nwere ike igosi ya n'oge na-adịghị anya
Facebook ga-eme ka ụda dị na vidiyo nke mgbasa ozi na-akpaghị aka